Maraykanka Oo dukhayn ku dilay Xubno Alshabaab ka tirsan – Idil News
Maraykanka Oo dukhayn ku dilay Xubno Alshabaab ka tirsan
Posted By: Idil News Staff December 30, 2019
Milatariga Mareykanka ayaa sheegaya in afar ka mid ah mintidiinta Al-Shabaab ay ku dileen duqeymo ka dhacay gudaha Soomaaliya.
War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi oo lala kaashanayay dowladda Soomaaliya lala eegtay laba bartilmaameed oo ku yaal gudaha Soomaaliya.
AFRICOM waxay sheegtay in ilaa afar ka tirsan mintididinta Al-Shabaab lagu dilay duqeymahaasi oo ka dhacay deegaannada Kuunya-barrow iyo Caliyoow Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
“Duqeymahaasi muhiimka ahi ayaa lala eegtay mintidiinta Al-Shabaab ee mas’uulka ka ah falalka argagixisnimo ee ka dhanka ah shacabka aan waxba galabtsan ee Soomaaliya…,” ayaa lagu yiri qoraalka AFRICOM.
“Mareykanka iyo dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay sii wadi doonaan in ay cadaadiska ku kordhiyaan ururka argagixisada ahi, si loogu diido in uu helo awood uu (ururkaasi) ku soo maleego weerarro argagixisnimo.”